जान्नुहोस् ! यस्ता छन् कब्जियतका लक्षणहरु र जोखिमहरु
जनवरी 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment कब्जियत, डा. हेमराज कोइराला
कब्जियतका लक्षणहरु र जोखिमहरु । मल निष्कासनको स्वाभाविक आवृत्तिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपल्ट कोमल दिसा गर्न नसकिएको अवस्थालाई कब्जियत भनिन्छ । विशेष रोग अवस्था जस्तै आन्द्राको घाउ, ट्युमर, पक्षघात, मधुमेह, थाइराइडिज्म, पराकिन्सन रोग जस्ता समस्या बाहेक अधिकांश अवस्थामा कब्जियतको मुख्य कारण अप्राकृतिक जीवनशैली नै हुन्छ । भोजन, व्यायाम, विश्राम, विचार र भावनात्मक रूपमा असन्तुलित जीवनसँग नै अप्राकृतिक जीवनशैलीको सम्बन्ध छ ।
कब्जियत सामान्य, महत्वपूर्ण तथा बहुुप्रचलित रोग भएतापनि यो रोग कयौँ रोगको कारण हुन्छ । पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानमा कब्जियतलाई भवावही रोगहरूको जननी मानिएको छ । कब्जियत हुँदा लामो समयसम्म मल आन्द्रामा नै रहने भएकाले आन्द्राभित्रै मल सडेर कुपित हुनपुुग्छ । यसरी लामो समयसम्म आन्द्रामा मल रहिरहँदा आन्द्रा भित्रै विषाक्त पदार्थ बन्न पुुग्छन् । ती विषाक्त पदार्थ आन्द्राबाटै अवशोषित भएर रगतको माध्यमबाट शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुुग्छन् । फलतः अङ्गहरूमा विषाक्तता बढ्न गइ महत्वपूर्ण अङ्गको कार्यक्षमतामा कमी आउँदा अनेक प्रकारका रोग पैदा हुन्छन् ।
← विचार र ब्यबहार ब्यस्थापनद्वारा मुटु रोगको उपचार
One thought on “जान्नुहोस् ! कब्जियतका लक्षणहरु र जोखिमहरु”
Pingback:यसरी गर्नुहोस् ! कब्जियत र यसको उपचार